पलशाह’ले शुरु गरे, निशुल्क अ’क्सिजन, अभियान, कोही नेपाली,म र्दै न अब अक्सिजन, नपाएर!:: Mero Desh
पलशाह’ले शुरु गरे, निशुल्क अ’क्सिजन, अभियान, कोही नेपाली,म र्दै न अब अक्सिजन, नपाएर!
Published on: २२ बैशाख २०७८, बुधबार ०७:३९
काठमाडौं : अभिनेता पल शाहले अक्सिन सिलिण्डरको अभाव कम गर्नका लागि अभियान सुरूगर्ने बताएका छन्। अक्सिजन नपाएर समस्यामा परेका अस्पतालहरुलाई २-३ दिन भित्रै सहयोग गरिने शाहले बताए। ‘अक्सिजन नपाएर अस्पताल मा समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने हो।
‘हामी अक्सिजन सिलिण्डर जम्मा गर्दैछौं। अहिले अक्सि जनत पाइएको छ तर सिलिण्डर पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले थन्किएका सिलिण्डर जम्मा गर्ने अनि किन्ने पनि योजना बनाएका छौं। केही, साथीहरू र विभिन्न संघ- संस्था सँग मिलेर पैसा जम्मा गर्छौं अनि किन्ने हो ।
‘केही सिलिण्डर किनिसके को भन्दै शाहले दुई तीन दिनदेखि नै वितरण सुरू गर्ने बताउ। अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर अक्सिजन सिलिण्डर वितरण गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
‘यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले को’रोनाको डरले घरमा जगेडा राखिएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न अपिल गरेका छन् । को’रोना संक्रमण भइहाले अक्सिजनले बचाउने भन्दै सर्व साधार -णहरूले आफूसँग भएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता नगरे पछि अहिले अभाव देखिएको छ ।
‘अक्सिजनको सिलिन्डर व्यक्तिको घरमा, जल विद्युत आयोजनामा ठुला गाडीको वर्कसपमा र सुनका गरगह ना बनाउने कारखानामा सिलिन्डर जगेडा रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
‘उनले भने, ‘सिलिन्डर घरमा राख्ने सबैले कम्पनीमा फिर्ता गरिदिनुस् । यसले मान्छेको ज्या न बचाउँछ । यो ठुलो दान गरे सरह हो । यस्तो बेला सिलिन्डर घरमा राख्नु भनेको अ प रा ध हो । सिलिन्डरको अभावले कोही मान्छे छ ट्प टा एर मर्ने अवस्था आयो भने पा प गरे सरह हुन्छ ।’
‘यस्तै अध्यक्ष बस्नेतले ठुला ठुला जलविद्युत आयोजनामा पनि अक्सिजन सिलिन्डरको ठुलो भण्डारण रहेकोले फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए ।ठुला आयोजनामा फलाम का,ट्न, जो ड्न अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ’, उनले भने, ‘अधि कांश जलविद्युत आयोजनामा अक्सिजन का सयौँसिलिन्ड र,होल्ड भएर बसेको छ ।
‘ती सबै सिलिन्डर फिर्ता गर्नुपर्छ । मान्छेको जीवन बचाउनु अहिलेको पहिलो काम हो ।’ अहिले अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन अस्पताल लाई मात्र दिनुपर्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताए । अक्सिजन उत्पादन उद्योगहरुलाई सरकारले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गरिने पनि अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।